SPM News: Somali 5.11.22
﻿Macalimiinta dugsiyada magaalada Sioux waxay heli doonaan $765 kordhinta mushaharkooda aasaasiga ah. Taasi waxay ka badan tahay $2,400 in ka yar intii ay soo jeediyeen ururka macallimiinta.Guddiga dugsigu wuxuu ansixiyay heshiiska Ururka Waxbarashada Magaalada Sioux, kaas oo matalaya macalimiinta degmada, Isniintii.Ururka Waxbarashada Magaalada Sioux ayaa markii hore soo jeediyay in boqolkiiba 8.6 la kordhiyo mushaharka aasaasiga ah.
Saraakiisha Iowa ayaa bilaabay olole cusub oo xayeysiis ah oo diiradda lagu saarayo caafimaadka maskaxda ee carruurta iyo ka hortagga is-dilitaanka.
Xayeysiisyada ayaa laga sii dayn doonaa baraha bulshada iyo baraha dhaqameed ee laga bilaabo bishan.Agaasimaha Waaxda Adeegyada Aadanaha ayaa sheegay in gobolku uu bilaabayo ololaha maadaama uu arkayo kororka carruurta yaryar ee ay la kulmaan dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka.Xayeysiisyadu waxay ku booriyaan carruurta u halgamaysa inay raadsadaan caawimo. Waxayna dadka waaweyn ku hagtaa agabka si ay uga caawiyaan inay u wajahaan mawduuca caafimaadka dhimirka ee carruurta.Iowans u baahan caawimo waxay ka heli karaan agabkan noloshaada Iowa dot org.Ma jirin waxqabadyo badan oo ka dhacay beeraha todobaadkii hore.
U.S.D.A. Warbixinta dalagga ayaa sheegtay in cimiladu ay beeralayda ku koobtay qiyaastii laba maalmood oo wanaagsan oo beerta.Iyada oo aan lahayn cagaf-cagafyo jiidaya beeraleyda, kaliya 5 boqolkiiba wax ka badan dalagga galleyda ayaa dhulka helay wadar ahaan hadda 14%.
Raadiyaha Iowa ayaa ku warramay in xawligu laba toddobaad ka dambeeyo labadii sannadkii hore iyo celceliska 5-ta sano.Beeritaanka soybeanku waxa uu ka guuray afar ilaa todoba boqolkiiba. Taasi waa 12 maalmood oo ka dambeeya xawaaraha beeritaanka digirta ee sannadkii hore iyo 11 maalmood oo ka dambeeya celceliska 5-sano.